Okulandelayo | Ikusasa Le-Blog Work
Okulandelayo™ Ikusasa Le-Blog Work
Uyemukelwa kubhulogi le-future of Work - kulapho uzothola khona okuthunyelwe kuzo zonke izinto ezihlobene nekusasa lomsebenzi.
Sesha ngu Usuku Khetha Usuku April 13, 2021 Mashi 24, 2021 February 17, 2021 December 14, 2020 November 18, 2020 October 22, 2020 October 8, 2020 August 27, 2020 August 18, 2020 July 7, 2020 Kwangathi 22, 2020 April 21, 2020 April 13, 2020 Mashi 31, 2020 Mashi 25, 2020 Mashi 16, 2020 Mashi 13, 2020 February 11, 2020 February 4, 2020 January 2, 2020 December 19, 2019 November 25, 2019 November 19, 2019 November 14, 2019 November 4, 2019 October 24, 2019 October 6, 2019 September 18, 2019 September 5, 2019 August 29, 2019 August 17, 2019 July 23, 2019 July 4, 2019 July 2, 2019 June 21, 2019 June 14, 2019 Kwangathi 27, 2019 Kwangathi 6, 2019 April 23, 2019 April 11, 2019 Mashi 25, 2019 Mashi 12, 2019 Mashi 11, 2019 February 28, 2019 February 14, 2019 February 5, 2019 January 29, 2019 January 15, 2019 January 3, 2019 December 5, 2018 December 3, 2018 November 20, 2018 November 6, 2018 October 30, 2018 October 14, 2018 September 29, 2018 September 19, 2018 September 12, 2018 September 5, 2018 August 27, 2018 August 17, 2018 August 1, 2018 July 26, 2018 July 23, 2018 July 11, 2018 July 9, 2018 June 28, 2018 Kwangathi 21, 2018 April 26, 2018 April 11, 2018 Mashi 20, 2018 February 28, 2018 February 20, 2018 January 31, 2018 January 9, 2018 January 3, 2018 December 11, 2017 December 4, 2017 November 11, 2017 October 23, 2017 October 16, 2017 September 12, 2017 September 7, 2017 August 25, 2017 July 26, 2017 July 19, 2017 June 15, 2017 June 7, 2017 Kwangathi 23, 2017 Kwangathi 4, 2017 Kwangathi 2, 2017 April 18, 2017 April 5, 2017 Mashi 21, 2017 Mashi 10, 2017 Mashi 1, 2017 February 20, 2017 February 7, 2017 January 17, 2017 January 6, 2017 December 14, 2016 December 9, 2016 November 21, 2016 November 16, 2016 October 28, 2016 October 12, 2016 October 3, 2016 September 23, 2016 September 14, 2016 August 22, 2016 August 12, 2016 July 19, 2016 June 28, 2016 June 22, 2016 June 13, 2016 Kwangathi 17, 2016 Kwangathi 12, 2016 Kwangathi 2, 2016 April 25, 2016 April 7, 2016 Mashi 29, 2016 Mashi 14, 2016 Mashi 12, 2016 February 10, 2016 January 19, 2016 January 17, 2016 December 29, 2015 December 13, 2015 December 8, 2015 November 27, 2015 November 23, 2015 November 19, 2015 November 9, 2015 October 14, 2015 September 16, 2015 August 28, 2015 August 14, 2015 August 6, 2015 July 27, 2015 July 15, 2015 June 10, 2015 Kwangathi 11, 2015 April 1, 2015 Mashi 23, 2015 Mashi 11, 2015 February 8, 2015 February 3, 2015 January 18, 2015 December 23, 2014 December 8, 2014 October 29, 2014 October 24, 2014 October 8, 2014 October 3, 2014 September 9, 2014 September 4, 2014 August 29, 2014 August 28, 2014 August 27, 2014 June 25, 2014 June 12, 2014 Kwangathi 25, 2014 Kwangathi 16, 2014 Kwangathi 15, 2014 Kwangathi 13, 2014 Kwangathi 8, 2014 April 24, 2014 April 17, 2014 April 14, 2014 April 11, 2014 Mashi 28, 2014 Mashi 19, 2014 February 27, 2014 February 20, 2014 February 4, 2014 February 3, 2014 January 16, 2014 December 6, 2013 November 14, 2013 November 8, 2013 September 19, 2013 September 16, 2013 September 5, 2013 August 22, 2013 August 18, 2013 July 20, 2013 Kwangathi 20, 2013 April 20, 2013 Mashi 20, 2013 February 20, 2013 January 20, 2013 December 23, 2012 December 20, 2012 November 23, 2012 November 20, 2012 October 20, 2012 September 20, 2012 August 20, 2012 July 23, 2012 July 20, 2012 June 20, 2012 Kwangathi 20, 2012 April 20, 2012 Mashi 20, 2012 Mashi 3, 2012 February 23, 2012 February 20, 2012 January 28, 2012 January 23, 2012 January 21, 2012 January 20, 2012 January 19, 2012 December 22, 2011 December 20, 2011 November 20, 2011 October 20, 2011 September 20, 2011 August 20, 2011 July 20, 2011 June 20, 2011 Kwangathi 20, 2011 Mashi 20, 2011
Sesha ngu Isigaba Khetha CategoryI-1 Indawo YokusebenzelaIzizukulwane ze-3esihlokweniOkuhamba phambili kwamaBhulogiBlogBusinessI-CEO Solutionsshintsha ubuholishintsha ukuphathwaShintsha Ukuphathwa KwabadalaIbhizinisi LokuqwashisaUbuholi Bokuziphendukela KwemveloIkusasa LomsebenziUGen Y emhlabeni jikeleleIsizukulwane XIsizukulwane YIGenerations neTekhnolojiIzizukulwane EmsebenziniUkuqamba kanye nokudala endaweni yokusebenzaUkuqamba endaweni yokusebenzaUkudidiyela ubuchwepheshe kanye nokuxhumana ukuze uveze amandla amakhulu wobuntuUmeluleki WobuholiAmasu WobuholiAmathiphu WobuholiUkuhola Indawo EguqukayoUkuhola Indawo Yokusebenzela Emikhakheni EhlukahlukeneUkuhola iGenerationsMediaushintsho kwenhlanganoIzinqubo ZokubonwayoIndawo yokusebenza ye2020Okushisa-izikhothaUkukhangisaThuthukisa Ubuholi Bakho
Isizukulwane Covid Nekusasa
IGeneration Covid nekusasa …… Kunesizukulwane esisha edolobheni - iGeneration Covid yaso yaziwa nangokuthi uGen C. okubandakanya abantu abasha abangaphansi kweminyaka engamashumi amabili. Kungenzeka wazi ezinye izizukulwane: Gen Z 1997 to 2020 (know for being the social media generation) Millenials 1981 to 1996 (known […]
Izifundo Ezinhlanu Zobuholi Ezifundwa Kubhubhane
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule senze ucwaningo lwabaholi abavela ezimbonini eziningi mayelana nezifundo zabo zobuholi abazifunde kulo bhubhane. Esikuzwe emuva kubaholi ukuthi kube nokufunda okuningi kusuka ngo-2020 kuya ku-2021. Abanye abaholi bebengafuni ngisho nokucabanga ngezifundo abazitholile ngenxa […]
Izindlela ezihamba phambili zabasebenzi abakude
Senze ucwaningo oluningi lwabasebenzi bakude futhi sihlanganise imikhuba emihle yabasebenzi bakude. Ngezindlela eziningi kube nokuvumelana okujwayelekile kokuthi lapho unyaka we-2020 usuphelile kuzoba nomqondo wokubuyela kokujwayelekile. Noma ngabe yikuphi okujwayelekile ngamazinga wanamuhla kusobala ukuthi kukhona okujwayelekile okujwayelekile […]
Ama-21 NextMapping Workplace Trends ka-2021
Kulo nyaka sabelana ngamathrendi ethu angu-21 NextMapping Workplace for 2021 nge-slideshare. I-Covid19 ne-2020 zithinte unomphela indlela esisebenza ngayo nokuthi sifuna ukuphila kanjani. Sisekuqaleni kwezinguquko zomphakathi esizozibona njengomphumela wobhadane lomhlaba wonke.
Nakhu Okumele Ubheke Phambili Ku-2021
Nakhu okumele sikulindele ngo-2021. Ngo-2020 umhlaba washintsha kakhulu - indlela esisebenza ngayo - indlela esiphila ngayo nendlela esibheka ngayo ikusasa. Ngo-2020 sonke singavuma ukuthi sonke sibhekene nezinga elithile lokucindezeleka. Ukuba ngumuntu ukuhlangabezana nengcindezi. I […]
Umsebenzi Wethu Esiwubhadane Kuyancipha Ukucindezelwa Kwegazi Labantu
Ngabe u-2020 ukukhahlele kuwe uyazi ini? Lokhu kungukuthatha kwami ​​ukuthi mina / singagxila kanjani ebuntwini bethu obuvamile phakathi nobhadane. Angazi ngawe kepha u-2020 kube ukukhahlela okukhulu esihlalweni sebhulukwe. Kubukeka sengathi ingcindezi yalo bhubhane seyigqoke abaningi […]
Indawo Yokusebenzela Yesikhathi Esizayo Yi-Hybrid Of Remote and In Office Workers
Sizwile izinkulumo eziningi mayelana 'nokujwayelekile okusha' selokhu kuqale ubhadane. Empeleni akekho owaziyo ngempela ukuthi lokho kujwayelekile okusha kuzobukeka kanjani. Njengamanje sibhekene nenguquko kwezenhlalo. Ubhadane ludala ukuthi abasebenzi baphinde bahlole ukuthi umsebenzi usho ukuthini kubo ngawodwana. Abaqashi bazivumelanise […]
Isifundo Samacala Omshwalense: Izindlela ezi-5 Zokusebenza ukude
Isifundo Samacala Omshwalense: Izindlela ezi-5 Zokusebenza Ngokuthunyelwe Kwabavakashi Abakude nguCrystal Metz - UCrystal ubuye abe ngumqeqeshi Oqinisekisiwe Wosomabhizinisi Olandelayo osebenza nosomabhizinisi ukwenza imephu ngempumelelo elandelayo ngokulandela impumelelo enkulu. Ukusebenza ukude, noma ukuqhuba ibhizinisi lakho, ukuphatha abasebenzi nokugcina amaklayenti ajabule ekhaya, kungaba yinkohliso ukusho […]
Ama-5 wobuholi AmaHack for the WFH Ajwayelekile (Umsebenzi Usuka Ekhaya) Izinselelo
Kulokhu okuthunyelwe kubhulogi ngabelana ngama-hacks wobuholi be-5 ngezinselelo ezivamile ze-WFH (zisebenza ekhaya). Ocingweni lwakamuva lwe-Zoom ne-CEO sixoxe ngezinto ezigcina yena nabaholi bakhe bengasalali ebusuku ngesikhathi salo bhubhane. Izinselelo yena nabaholi bakhe ababebhekene nazo zazifana ncamashi […]
Izindlela eziyi-8 Abaholi Abangasekela Abasebenza Ngazo Ukuze Bachume Ngezikhathi Zokungaqiniseki Okukhulu
Kunezindlela eziyi-8 abaholi abangaxhasa ngazo abasebenzi babo ukuze baphumelele ezikhathini zokungaqiniseki okukhulu. Muva nje iklayenti lihlanganyele nokuthi belinenkinga yokugcina amalungu eqembu lawo ebandakanyekile. Uphinde waveza nokuthi abasebenzi bakhe baphonselwa inselelo ngokuhlala bagxile futhi bakhiqize. Alikho ibhuku lokudlala lokubhekana ngempumelelo nakho konke […]
Ikusasa Lomsebenzi Namandla e-Brand
Muva nje bengiyisihambeli kuma-ejensi akwa-Zync ama-podcast uchungechunge ngikhuluma ngekusasa lomsebenzi namandla e-brand.
Indlela Abaholi Abakhula Ngayo Ukuhola Kokuphazamiseka Kwe-Covid-19
Izolo ngibuzwe ukuthi abaholi basukuma kanjani ukuhola ekuphazamisekeni kweCovid-19.
Phakathi KweCoronavirus - Uzizwa Kanjani Ngekusasa?
Sithumele umbuzo wenhlolovo emphakathini ubuza - “phakathi kwe-coronavirus uzizwa unjani ngekusasa? Idatha isangena futhi uma usuqedile ucwaningo uzobona imiphumela. Ngezansi sabelana ngezimpendulo zokuqala. Imibuzo esiyibuzile ibandakanya: Ingabe uzizwa unethemba mayelana ne- […]
ICoronavirus Isheshisa Ikusasa Lomsebenzi
Mashi 31, 2020
Onke ama-futurists akhuluma ngokuphazamiseka nokulungela ukuphazanyiswa - ukuphazamiseka okukodwa esazi ngokuqinisekile ukuthi iCoronavirus isheshisa ikusasa lomsebenzi. Njengoba abantu bejwayela ukusebenza kude, izinselelo ezintsha sezivelile namathuba amasha ezomnotho azovela Uzamcolo wolwazi nge-coronavirus unamandla futhi nsuku zonke […]
Isifundo Esisha Esiku-inthanethi - Ungayakha Kanjani & Usenze Ngejubane Lokushintsha
Sijabule ngempela ukwengeza isifundo esisha online - "Ungayakha Kanjani futhi Usungule Ngejubane Loshintsho". NgoFebhuwari sengeze isifundo esithi, “Ikusasa Lokuqasha Nokugcina Ithalente Eliphezulu”. Isifundo sethu esisha esithi, “How to Create and Innovate At The Speed ​​of Change” sihlose ukusiza abaholi, amalungu eqembu, […]
Ukukhuphuka Komsebenzi Ekude ngo-2020 - Ungakwenza Kanjani Kuphumelele Enkampanini Yakho
Njengoba ngibhala lokhu siphakathi kobhadane lwe-coronavirus. Sikhuphukile emisebenzini ekude ngo-2020. Izikole zivaliwe, izindawo zokudlela ziyavalwa noma zishintshe izinsizakalo ezizokhishwa kuphela, abathengisi abanjengo-Apple bavale izitolo futhi yonke imboni iyathinteka kulokhu kuphazamiseka okukhulu. Iminyaka engu-5 […]
Sebenzisa Imodeli ye-PREDICT Ukuze Unqande Ukukhathazeka Ngekusasa
Mashi 13, 2020
Sisenkingeni yobhadane lweCovid-19 futhi wonke umuntu ukhathazekile, wonke umuntu uzizwa engaboni emehlweni ngomthelela emnothweni womhlaba. Singasebenzisa amathuluzi afana nemodeli ye-PREDICT ukusiza ukunciphisa ukukhathazeka ngekusasa. Yonke imboni iyathinteka kubandakanya imboni yezokuvakasha, imboni yemihlangano, kanye nokuhlinzekwa […]
UJason Campbell weMindValley uxoxa noCheryl Cran mayelana 'nokuzilawula' okudingekayo ukwakha ikusasa elihlanganyelwe. Ukulalela umsindo ophelele wale ngxoxo yiza lapha. UJason: NginoCheryl Cran lapha, okungukuthi, oh nkosi yami, sizoba nenjabulo enjalo sikhulume ngekusasa lomsebenzi nokuthi ikusasa […]
Ikusasa Lokubona Kwamakhasimende
Liyini ikusasa lesipiliyoni samakhasimende? Eminyakeni embalwa edlule ngisebenze nenkampani yezobuchwepheshe ebifaka izingqungquthela zokubonga amakhasimende. Ukugxila kwezingqungquthela bekuwukuhlinzeka amafemu ezobuchwepheshe ngamathuluzi amasha nezinsizakusebenza zokusebenzisa ubuchwepheshe bawo. Ngacelwa ukuba ngibe yisihluthulelo sale micimbi ku- […]
2020 Unyaka Wokubheja Ngathi
Kuyisiqalo seminyaka eyishumi entsha NO-2020 unyaka wokuzenza ngcono. Sekuyisikhathi sokuthi ngamunye wethu akhuphule ukuzibophezela kwethu ekubeni ngabantu abangcono, abadlali bamaqembu abangcono, nabaholi abangcono. Uyakuzwa ukuphuthuma kwakho? Uyakuzwa ukudonswa kwesikhathi esizayo usicela ukuthi […]
Ukugubha i-2019 e-NextMapping
Sigubha lapha kwa-NextMapping njengoba u-2019 eza ngasemaphethelweni. Ngo-2019 incwadi yami ethi, “NextMapping - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi” FUTHI idale uhlelo lwesibili ngebhuku lokusebenzela elizoshicilelwa ngoFebhuwari 2. Amakhasimende ethu abonisana nawo andise impumelelo yawo ngo-2020 ngokwamukela ubuholi obabiwe nabo. Ku […]
I-Digital, Guqula kanye ne-PREDICT Model Chris Rainey Izingxoxo noCheryl Cran
Namuhla ngibe nenjabulo yokuxoxwa ngumsunguli kaChris Rainey weHRleaders.com ngekusasa lomsebenzi, idigital, ushintsho nemodeli ye-PREDICT esencwadini yami ethi, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Create The future of Work". Inhlolokhono ibigxile ekusaseni eliguquka ngokushesha nokuthi abaholi bangayisebenzisa kanjani imodeli ye-PREDICT ukuze […]
Ungathola Kanjani Abasebenzi Ukuzibandakanya
Ku-NextMapping sihlolisise izinkulungwane zabaholi futhi enye yezinkinga eziphezulu abaholi ababhekene nazo ukuthi "bangabenza kanjani abasebenzi babambe iqhaza". Muva nje, ngiqhube uchungechunge lwezingxoxo zeBMO Bank yaseMontreal ngaphesheya kweCanada. Saya eWinnipeg, eCalgary, e-Edmonton, eVancouver, eMontreal naseToronto. Ukugxila bekukusasa lomsebenzi […]
Enye ye-Trends Yekusasa Lomsebenzi 2020
Muva nje sikhiphe umbiko wethu ovuselelwe weTop 20 Trends for Future of Work 2020. Lo mbhalo ugxile kokunye kwezitayela zekusasa lomsebenzi 2020. Enye yamathrendi esiwacwaningile kufaka phakathi ukugxila ekuguqulweni kwedijithali ngokusebenzisa i-lens 'yabantu kuqala '. Abaholi abaningi esibahlolile bathi […]
Ungakuyeka Kanjani Ukungabaza Emsebenzini
Sihlolisise izinkulungwane zabaholi kanti enye yezinselelo eziphezulu eveziwe yilezi: Ungakuqeda kanjani ukungabaza emsebenzini. Ucwaningo lwe-NextMapping Ijubane elididayo lezinguquko kubuchwepheshe nakwezamabhizinisi lenza kube nzima ukugcina abasebenzi behlanganyela ekwakheni ikusasa. Abasebenzi baphonselwa inselelo ngoshintsho oluqhubekayo futhi ababethembi abaholi babo […]
Ayisekho “Amakhono Athambile”?
Igama elithi “amakhono athambile” lisho ukubuthakathaka noma okungabalulekile ngakho-ke ngithi, 'Asekho amakhono athambile!'. Ngikumishini! Bengilokhu kulo mkhankaso isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi! Ngiyethemba ukuthi uzojoyina nami. Inhloso yokwenza ukuthi esikhundleni segama elithi “amakhono athambile” kufakwe igama elisha njengokuthi “kubalulekile […]
Ukubikezela Ikusasa Ngezindlela Zokupheqa
Akukho bhola lekristalu kepha kunemfihlo ukuthi abaqambi bayayazi - ungabikezela ikusasa ngokusebenzisa amaphethini wokulinganisa. Kwakungu-Abraham Lincoln owathi, "indlela engcono kakhulu yokubikezela ikusasa ukuyakha". Ku-NextMapping sikusiza ukuthi ubikezele ikusasa ngokusebenzisa amaphethini wokusebenzisa. Encwadini yami, “I-NextMapping - Lindela, […]
Lolu Shintsho Olukhulu Luzokwakha Ikusasa Lomsebenzi
Ngibhala lokhu ngivela esikhumulweni sezindiza saseMinneapolis lapho ngiphothule khona uchungechunge lwamagama asemqoka kumakhasimende asembonini yokuthutha abasebenzi, amaklayenti asembonini yezokuvikela kanye namakhasimende akuhulumeni wesifundazwe. Yize ngayinye yalezi zimboni ingabonakala ingahlukile futhi ingafani ngokufanayo iqiniso ukuthi yonke imboni eyingqayizivele inezinto ezifanayo […]
Akubuzwa ukuthi abasebenzi bakusasa bazoba ngabasebenzi abaguquguqukayo. Abasebenzi bakusasa bazobukeka behluke ngokuphelele kunanamuhla. Amathrendi amaningi akhomba kuzinguquko ezithinta ikusasa lezindawo zokusebenza. Encwadini yami, "I-NextMapping - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa […]
Abaholi Bezidingo Zesikhathi Esizayo Ngezimpawu Zobudoda Nezabesifazane
Ikusasa lidinga abaholi abanezimfanelo zobudoda nezabesifazane. Sisesikhathini nasendaweni ebaluleke kakhulu emhlabeni. Nsuku zonke sibona izibonelo zobuholi obukhulu futhi obungabalulekile kangako bobabili abesilisa nabesifazane, kungaba ezinkampanini, ukuqala phezulu noma kwezepolitiki. Izimfanelo zobuholi esikhathini esedlule beziyizinduna ngokuyinhloko ku- […]
Ingabe Abantu Bakho Bayabethemba Abaholi Babo?
Nginombuzo: Ingabe abantu bakho bayabethemba abaholi babo? Uma uphendule ngoyebo - kuhle ukuthi inkampani yakho isilungele ikusasa! Kukhona ucwaningo olwenziwe isayensi olukhombisa ukuthi isiko lokuthembela linamazinga aphezulu okuzibandakanya nezinye izinzuzo. UPaul J. Zak umcwaningi waseHarvard ucwaninge ngobudlelwano phakathi kwetrust, ubuholi kanye […]
Umshuwalense Wezindawo Zokusebenzela 2025
Izimboni eziningi ezibandakanya umshwalense zivumelana ngokushesha nezinguquko eziningi ezithinta umshwalense wasemsebenzini wangakusasa ka-2025. I-AI, i-automation, amarobhothi, ukushintsha isimo sengqondo sabasebenzi kulithinta ngokushesha ikusasa lomshuwalense. Kunesidingo sokuthi abaholi babe namakhono athuthukisiwe njengokukwazi ukuba nemibono eminingi. Abaholi kumele bakwazi ukuhola […]
Ungaba Kanjani Ukulungele Ikusasa - Ingxoxo no-Amber Mac
UCheryl Cran: Ngijabule kakhulu namhlanje, ukuba no-Amber Mac njengesivakashi sethu. Amber sicela wabelane namakhasimende ethu ngemvelaphi yakho. U-Amber Mac: Ngiyabonga, sengisebenze cishe iminyaka engama-20 manje embonini yezobuchwepheshe. Ngiqale ukungena phakathi kokhula ngesikhathi sokuqala kwezobuchwepheshe eSan Francisco. Ngine-journalism […]
Ungashintsha Kanjani Ngezikhathi Ze-Flux
Ngabe ugcwele ushintsho olukhulu? Joyina iklabhu! Sisesikhathini lapho kubalulekile ukuthi sonke sibe ngcono ekufundeni indlela yokuguquguquka ngezikhathi zokuguquguquka. Incazelo ye-'flex ': Ukuhambisa noma ukushuba Incazelo ye' flux ': Igama elifanayo' ushintsho 'Ijubane lenguquko nolwazi esibhekene nalo […]
1 2 ... 73 Okulandelayo>
Thola imininingwane yakamuva nezibuyekezo ngekusasa lomsebenzi.